Waa maxay sababta uu Farmaajo xilligaan u joogo madaxtooyada? - Caasimada Online
Home Warar Waa maxay sababta uu Farmaajo xilligaan u joogo madaxtooyada?
Waa maxay sababta uu Farmaajo xilligaan u joogo madaxtooyada?
Mogadishu (Caasimadda Online) – Madaxweynaha lSoomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa maanta Villa Somalia ku caasuumay Xasan Shiikh Maxamuud oo uu waqtiga xilkiisu idlaaday.
Xasan Shiikh ayaa kulan qado ah ku casuumay Farmaajo iyadoo uu kulankoodu imaanayo maalin ka hor Xafladda Xilwareejinta Madaxweyne ee dalka Soomaaliya oo ku beegan berri oo Khamiis ah 16ka Febraayo 2017ka.